Misoro yeNhau dzaNhasi Muvhuro , Ndira 01, 2018
Vaimbove mutevedzeri wemutungamiri wenyika, zvakare vari mukuru webato rinopikisa reNational People’s Party, Doctor Runaida Joice Mujuru, vanoti kunyange hazvo vari kufara nekusiya basa kwevaimbove mutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, havana mufaro nekuti vese vaishanda naVaMugabe pamwe nenzira dzavaishandisa kutonga zvichiripo.
Vamwe vanoti mubatanidzwa weMDC Alliance woita zinyeke nyeke.Vanhu vakawanda nhasi vashanyira mapako emuChinhoyi kudarika mamwe mazuva ezororo.
Nyanzvi munyaya dzehutano dzinoti Zimbabwe ichakatarisana nemutoro mukuru munyaya dzekuwanisa vanhu kodzero yehutano. Nyanzvi idzi dziri kukurudzira kuti hurumende iwanise bazi iri mari kuti ikwanise kufambisa mabasa mugore idzva rino.
Muchirongwa cheLiveTalk na 8pm, tiri kutarisa gore idzva ra 2018 ratanga nhasi.
Vanoda kuteerera Studio7, tibateyi na7pm pamasaisai anoti 909 am 4930; 13860, 6080, 15580 ne 15460 Kilohertz paShortwave mazuva ose.Musakanganwe kuteerera zvimwe zvirongwa zvedu na 6am, uye 2pm mazuva ose.
Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook yedu. Endai pa link iyi: https://www.facebook.com/voa.shona
Misoro yeNhau dzaNhasi, Muvhuro, Ndira 01, 2018